ကျွန်မ ရင်ဖွင့် ပါ ရစေ …ကျမ က နိုင်ငံခြား မှာ အိမ်ေ ဖာ် လုပ် ပါ တယ်…. – Shwewiki.com
ကျွန်မ ရင်ဖွင့် ပါ ရစေ …ကျမ က နိုင်ငံခြား မှာ အိမ်ေ ဖာ် လုပ် ပါ တယ်….
ကျွန် မ ရင်ဖွင့် ပါ ရစေ ကျမက နိုင်ငံခြား မှာ အိမ်ဖော်လုပ်ပါတယ် တနေကုန် အလုပ်လု ပ်ရ ပါ တယ် ပင်ပန်းပါတယ် တခါတလေနှိ ပ်စက်ခံရ ပါတယ် တခါတလေ အဆဲ အဆိုခံ ရ ပါ တယ်…
အခန့် မသင့် ရင် အသက်ခံရနိုင် ပါ တယ် မုဒိန်းကျင့် ခံရနိုင်တယ်… ဒါပေမယ့်ပိုက်ဆံရတယ်ရှင့် ကျမအိမ်ကိုငွေပို့နိုင်တယ် ကျမပင်ပန်းလည်း ကျမဆင်းရဲလည်း ကျမငိုကြွေးနေ လည်း ကျမ ညည်းညူ နေလည်း ကျမအိမ်က လူတွေ ထမင်း ဝဝစား နိုင်တယ်
အိပ်ရေးဝဝအိပ်နိုင် တယ် ညဘက် တီဗွီကြည့်ရင်းပန်ကာလေး နဲ့ အေးအေး လူလူ ကော်ဖီသောက်နေနိုင် တယ် ကျမကျေနပ်တယ်။ “သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ ”ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ် ကျမကြားဖူးတယ် ကျမပြုံးမိတယ်.. ကျမတို့ ဘဝတွေ အတွက်တော့ ခွေးသခင်ဖြစ်ဖို့တောင် ခွေးစာမတတ်နိုင် လို့မမွေးနိုင် ဘူးလေ ထားပါ.
ဆောင်ပုဒ်တွေအောက်မှာ ကျမအငတ်မခံနိုင်ဘူး ကျမမိသားစု ကို လည်း အငတ် မထားနိုင်ဘူး ဒါပေမယ့် ကျမဒီဆောင် ပုဒ်လေး ကို အရမ်း ပင်ပန်းလာတဲ့နေ့တွေမှာ နှုတ်က တိုးတိုးလေးရွတ်ဆိုနေ တုန်း ပဲ ။ “ထုတ်ကုန်နှစ်ဆတိုးမြှင့်ကြ” တဲ့ သိပ်မှန်တယ်ရှင့် ကျမတို့နိုင်ငံမှာအပေါဆုံးထုတ်ကုန်ကလူပဲ ကမ္ဘာတလွှား ရောက်နေတဲ့ကျမတို့လူမျိုးတွေ သန်းနဲ့ချီ ရှိတယ် ကြုံရာကျပန်းလုပ်နေကြရတာ တချို့လည်းငွေစုမိတယ် တချို့လည်းအသတ်ခံရတယ် တချို့လည်းဘဝတွေပျက်ကြတယ် တချို့လည်းအဆင်ပြေကြ တယ် ။ “သယံဇာတပေါတဲ့ဒို့ ရဲ့ တိုင်းပြည် ” တဲ့ ကျမပြုံး မိတယ် ကျမတို့ဒေသ မှာ တောတွေတောင်တွေ တွင်းတွေ မှ အများကြီး ဒါတွေကျမတို့ မပိုင်ဘူး
ကျမတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး လူမျိုးခြားတွေ နဲ့ သာဆိုင်တယ် “တို့မြေကိုတစ်လက်မအထိမခံ”ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အောက်မှာ လက်မလောက်ကိုလာမပြောနဲ့ မိုင်လိုက်ခြံစည်းရိုးခတ်ကြပြီး လုံခြုံရေးပါချပေးထားတာ ကျမတို့ဒေသမှာ ရှိတဲ့ အရာတွေ နဲ့ ကျမတို့ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်စားလို့ရ ပါလျက် နဲ့ကျမ တို့ ငတ်နေရတယ် မတတ်နိုင်ဘူးလေ “ပြည်ပ အားကိုးပုဆိန်ရိုး”ဆိုပေမယ့် အားကိုးစရာ ရောင်းစရာ ဆိုလို့ ပြည်ပပဲရှိတာကိုး… ပြည်တွင်းမှာအားကိုးစရာဆိုတာလည်း သူတို့တသိုက်ပဲရှိတာဆိုတော့….. ဆိုတော့ပေါ့လေ… ကျမတို့ဒေသကနေ အိမ်ဖော်ထွက်လုပ်ကြ တဲ့ အလုပ်ကြမ်း ထွက်လုပ်ကြတဲ့သူတွေ ထောင်နဲ့ချီရှိတယ်ရှင့်
အချိန်တန်အိမ်ကိုငွေပို့ကြတယ် အဲဒီငွေ နဲ့ကျမတို့ဒေသ အဆင်ပြေကြတယ် ဘာတဲ့ “ပြည့်အင်အားသည်ပြည်တွင်းမှာသာရှိသည်”တဲ့ ကျမတို့ရွာမှာကလေးငယ်တွေနဲ့ အဖိုးအဖွားတွေပဲကျန်ခဲ့တယ် “လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်”တဲ့ကြားဖူး တယ် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင် တွေးနိုင်ခေါ်နိုင်တဲ့ အရွယ်ကောင်းတွေအကုန်အပြင်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်း သင်ထားတဲ့ပညာရပ်တွေကို ထပ်မံလေ့လာပြီး အပြင်ထွက်ဖို့ပြင်နေကြတာဒုနဲ့ဒေး “ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်သစ်ကြီး” ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲရှင့်
ဒီ အဖိုးအဖွားတွေ လူမမည်ကလေးတွေနဲ့။ ရွာလုံးကျွတ်ထိုင်းမှာအလုပ်သွားလုပ်ကြတယ် ရွာကိုပိုက်ဆံပြန်ပို့ပြီး ရွာလုံးကျွတ်ပဲ ထိုင်းကပစ္စည်းတွေ ပြန်ဝယ်သုံးကြတယ် “ဝင်ငွေလည်ပတ်စီးဆင်းမှု”တဲ့ သင်ဖူးတယ် ဘယ်ကရပြီး ဘယ်ကို ပြန်လည်ပတ်မှာလဲရှင့်.. က်မလား .. ကျမ ဘွဲ့ရတယ်ရှင့် “ပညာရေးဝေးသည်မရှိ”ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အောက်မှာအဝေးသင်ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်
ကျမတို့လူမျိုးတွေ ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းဘွဲ့ယူပြီး မိဘကျေးဇူးကျမဆပ်ခဲ့ပါတယ် ဘွဲ့ဓာတ်ပုံလား ရှိတယ်ရှင့် အိမ်မှာချိတ်ထားတယ် ကျမလား မရှက်ဖူးရှင့် ဆရာဝန်ဘွဲ့ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရတွေတောင် ဒီမှာ အလုပ်မျိုးစုံ လုပ်နေကြတာ ပါ “ ပညာရေး ဆိုတာပြန်မရတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု”ပေါ့ သင်ပေးလိုက်ပြီး အကုန်အပြင်ထွက်ကြတာ သူပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်။
ကျမလား အမျိုးချစ်တာပေါ့ရှင် ကျမလူမျိုး ကျမဘာသာကိုချစ်တာပေါ့ ကျမခံယူထားတဲ့မျိုးချစ်စိတ်က ကျမလူမျိုးတွေငတ်နေတာကိုကျွေးချင်တယ် ကျမလူမျိုးတွေ ပညာမတတ်ကြတာကို ပညာသင်ပေးချင်တယ် မတရားမှုပေါင်းစုံကိုခါးစည်းခံနေရတာကို ကယ်တင်ပေးချင်တယ် အဲ့အတွက်ကျမအလုပ်လုပ်တယ် မျိုးချစ်ဘာသာချစ်ဆိုပြီး သူများလူမျိုး သူများဘာသာကို အလကားနေအော်ဆဲနေမယ့်အစား ကျမ ကျွန်သွားခံလိုက်တယ် ပိုက်ဆံရမှကျမမိသားစုအဆင်ပြေမယ်လေ
ကျမမိသားစုအဆင်ပြေမှ ကျမလူမျိုးကိုထောက်ပံ့လို့ရမယ် ဒါကျမခံယူချက်ပဲ “မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး” ဆောင်ပုဒ်အောက်မှာ အမျိုးတွေအကုန်လုံးဘီလီယံနဲ့ချီ ချမ်းသာသွားကြတာဘယ်သူတွေလဲ ကျမလား နိုင်ငံရေးတွေဘာတွေသိပ်မသိဘူးရှင့် သယံဇာတတွေကာကွယ်ပေးနေတယ်ပြောပြီး ရောင်းရောင်းစားသွားတာဘယ်သူတွေလည်း သိချင်တာ ရောင်းရတဲ့ဟာတွေဘယ်သူတွေရပြီး ဘာတွေလုပ်ကြလည်းသိချင်တာ အမျိုးဘာသာသာသနာလို့ ဖင်ကုန်းအော်နေကြပြီး တပြည်လုံးကတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့ဘာသာခြားအဆောက်အအုံတွေကို ဘယ်သူခွင့်ပြုခဲ့တာလဲ လူမျိုးခြားဘာသာခြား ထိပ်ပိုင်းအချင်းချင်းတွေနဲ့တော့ သူတို့ချင်း လက်ဝါးရိုက်ပေါင်းစားနေပြီး အောက်ခြေမှာသတ်ဖြတ်နေကြတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အမျိုးမျိုးတွေအောက်မှာ ကျမတသက်မက တိုက်လို့ခိုက်လို့မပြီးနိုင်ကြတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် မတရားချမ်းသာနေတဲ့လူတစ်စုက ဘယ်လိုချမ်းသာလာတာလဲ
အပေါ်မှာကျမပြောထားတဲ့ သုံးစားလို့မရတဲ့ဆောင်ပုဒ်တွေကို ဘယ်သူရေးခဲ့တာလဲ ဒါလေးပါဘဲ ပြောရရင်တော့အများကြီးပေါ့ရှင်……. လောလောဆယ်တော့ ကျမအမေနေမကောင်းဘူးတဲ့ “စားရိတ်မျှပေးကျန်းမာရေး”ဆိုတဲ့ဆေးရုံမှာ ဆေးထိုးအပ်မရှိ ဂွမ်းမရှိလို့ မြို့ပေါ်ထိတက်ကုရမှာ ကျမပိုက်ဆံပို့ရဦးမယ် ဒါကြောင့် ကျမ အလုပ်လုပ်လိုက်ဦးမယ်…..။
Credit: ပုံ-ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း မေတ္တာဖြင့်
သက် ဆိုင် ရာလူကြီးမင်းများ မြင်ကြပါစေ …သိမ်ဇ ရပ် မှာ Q ၀င်နေတဲ့ ညီမတစ်ယောက် ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ
(mask) အတုတွေ နဲ့ ကမ္ဘာ အနှံ့ ဂျင်းထည့်နေ တဲ့ တရု တ်ကုမ္ပဏီ ကို အမေရိကန် တရားစွဲ